HUAWEI P30 lite, 3D Curved Glass Design, 3D Selfie Camera | HUAWEI Myammar
မျက်နှာတိုင်းက ကွဲပြားမှုရှိပါတယ်။ HUAWEI ရဲ့ AI အထောက်အကူပြု ဆယ်လ်ဖီနည်းပညာက သင့်ရဲ့ဆယ်လ်ဖီတွေကို မျက်နှာအကျ၊ ပုံစံတို့အလိုက် အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ဒီနည်းပညာက မျက်နှာအကျနဲ့ အချက်အလက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး အကောင်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။
HUAWEI P30 lite ရဲ့ 120 ဒီဂရီ Ultra-Wide Angle Lens3 နဲ့အတူ ကိုယ့်ရဲ့ရှုထောင့်တွေကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြည့်ရှုပြီး ပိုပြီးသေသပ်လှပတဲ့ ရှုခင်းပုံရိပ်တွေဖန်တီးလိုက်ပါ။ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးတဲ့အခါ အကန့်အသတ်တွေ ရှိမနေတော့ပါဘူး။
AI ရဲ့ အနေအထားကိုသိရှိနိုင်တဲ့နည်းပညာနဲ့အတူ အဆင့်မြင့်မြင့်ဓာတ်ပုံတွေကို ရယူလိုက်ပါ။ HUAWEI P30 lite ရဲ့ ရှေ့ကင်မရာက ချိန်လိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် မတူညီတဲ့အနေအထား ၈ မျိုးကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်သလို ကျောဖက်ကင်မရာကတော့ ၂၂ မျိုးအထိ သိမြင်နိုင်ပါတယ်။ အရောင်တွေ၊ အလင်းအမှောင်တွေ၊ တောက်ပမှုတွေကို အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးပြီး အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတွေကို ရရှိစေပါတယ်။
HUAWEI P30 lite ရဲ့ Dewdrop မျက်နှာပြင်အသစ်နဲ့အတူ မြင်တွေ့၊ ခံစား၊ ဖန်တီးလိုက်ပါ။ ကြီးမားတယ်၊ လှပတယ်၊ တောက်ပတယ်။ ဒီ 6.15 လက်မအရွယ် FHD မျက်နှာပြင်နဲ့ Dewdrop notch လေးက သေသပ်လှပမှုတွေနဲ့အတူ အကောင်းဆုံးအရောင်တွေကို မြင်တွေ့ခံစားလိုက်ပါ။ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ကလည်း TÜV Rheinland ရဲ့ မျက်လုံးသက်သာမှုထောက်ခံချက် ရရှိထားတာကြောင့် မြင်တွေ့ခံစားမှုမှာ မျက်လုံးအတွက်ပိုပြီးသက်သာလွယ်ကူစေတဲ့ အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိနိုင်ပါတယ်။
စတိုင်ကျပြီး ကျစ်လစ်တယ်။ ဒီ HUAWEI P30 lite က လက်ထဲမှာ သက်သက်သာသာနဲ့ မြဲမြံစေမယ့်အပြင် ပါးလွှာတဲ့ 3D Curved ဖန်သားဒီဇိုင်းကလည်း လက်တစ်ဖက်တည်းနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူအသုံးပြုလို့ရစေမှာပါ။ သူ့ကို စွဲမက်စေမယ့် ရောင်ပြေးပုံစံအပြင် အရောင်သုံးမျိုးရရှိနိုပါတယ်။
သိုလှောင်မှု:6GB + 128 GB
HUAWEI P30 lite ရဲ့ တိုးတက်လာတဲ့ RAM နဲ့ သိမ်းဆည်းနိုင်မှုကြောင့် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေအတွက် နေရာကျယ်ကျယ်ရပြီပေါ့။ ပိုပြီးများတဲ့ပမာဏမှာ ဖိုင်တွေ၊ သီချင်းတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေ၊ ဂိမ်းတွေ စိတ်ကြိုက်သိမ်းဆည်းလိုက်ပါ။4.
ဘက်ထရီကြောင့် စိတ်ညစ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ HUAWEI 9V2A Quick Charge နဲ့ များပြားတဲံ 3340 mAh ဘက်ထရီ5 က လျင်လျင်မြန်မြန်အားသွင်းနိုင်သလို အချိန်အကြာကြီးလည်းအသုံးခံနိုင်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်မယ်။ ဂိမ်းတွေဆော့မယ်။ အင်တာနက်တွေသုံးမယ်။ HUAWEI P30 lite နဲ့ဆို ဘယ်အရာကမှ မရပ်တန့်နိုင်ပါဘူး။
အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် ဂိမ်းတွေစဆော့လိုက်တော့။ အဆင့်မြင့်တဲ့ GPU TURBO 2.0 နည်းပညာရဲ့ထောက်ပံ့မှုကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမြင့်တက်လာပြီး ဂိမ်းအတွေ့အကြုံပိုင်းမှာ ပိုပြီးလျင်မြန်ချောမွေ့လာစေပါတယ်။ တိုက်ပွဲတိုင်းမှာ အသာရပြီပေါ့။6.
ရှာဖွေတယ်ဆိုတာ ပိုပြီးလွယ်ကူအဆင်ပြေလာပါပြီ။ HUAWEI ရဲ့ AI အထောက်အကူပြု HiVision နည်းပညာ7 က သင့်ရဲ့ဖုန်းကို နေ့စဉ်ဘဝရဲ့ အသိဥာဏ်မြင့်အထောက်အကူအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးမှာပါ။ ရိုးရိုးလေး Scan လုပ်ပြီး ကမ္ဘာကြီးအကြောင်း ရှာဖွေရုံပါပဲ။br>
HUAWEI P30 lite က AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီး အနီးနားမှာရှိတဲ့ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေ၊ ပန်းတွေ စတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ အချက်အလက်တွေ၊ အကြောင်းအရာတွေအပြင် အစားအစာတွေမှာပါတဲ့ ကယ်လိုရီပမာဏစတာတွေကို အလိုအလျောက်ခွဲခြားဖော်ပြပေးပါတယ်။
HiVision ရဲ့ AR translation ကြောင့် ဘာသာစကားအဆင်မပြေမှုတွေကို မေ့ထားပြီး အေးအေးဆေးဆေးခရီးသွားလို့ရပါပြီ။ လမ်းဆိုင်းဘုတ်တွေကစလို့ စားသောက်ဆိုင်ရဲ့ menu တွေအထိ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ဘာသာပြန်နိုင်ပါတယ်။8 အရာအားလုံးအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်စေပြီပေါ့။
တွေ့တယ်၊ ရှာမယ်၊ ဝယ်မယ်
HiVision နဲ့ဆို အချိန်တိုင်း၊ နေရာတိုင်း ဈေးဝယ်လို့ရပါပြီ။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာကို Scan ဖတ်လိုက်ရုံနဲ့ AI နည်းပညာက အင်တာနက်ပေါ်ကနေ လျင်လျင်မြန်မြန်ရှာဖွေပေးနိုင်တာကြောင့် လွယ်ကူသက်သာတဲ့ ဈေးဝယ်အတွေ့အကြုံသစ်ရရှိနိုင်ပြီပေါ့။
ဖုန်းအဝင်ကို Video Ringtone ထားနိုင်ခြင်း
ပုံမှန်ဖုန်းအဝင်ပုံစံတွေကို ပျင်းနေပြီလား? HUAWEI P30 lite မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုပါ Ringtone ထားနိုင်လို့ ပိုပြီးပျော်စရာကောင်းပြီပေါ့။
ရှေ့ကင်မရာ: 32 MP
ကျောဖက်ကင်မရာသုံးခု: 24 MP Wide Angle Lens + 8 MP Ultra Wide Angle Lens +2MP Bokeh Lens. ထုတ်ကုန်အရောင်၊ ပုံစံ၊ အနေအထားနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ရည်ညွှန်းသက်သက်သာဖြစ်ပါသည်။ အမှန်တကယ်ထုတ်ကုန်သည် ကွဲပြားမှုရှိနိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံရဲ့ FOV က Distortion ပြင်ဆင်မှုကြောင့် အနည်းငယ်သေးနိုင်သည်။
HUAWEI P30 lite က Version အမျိုးမျိုးရှိပြီး အချို့ Version များက သတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံ၊ ဒေသများတွင်သာ ရရှိနိုင်ပါသည်။
ပုံသေပမာဏဖြစ်ပြီး HUAWEI ရဲ့ ဓာတ်ခွဲခန်းမှ စစ်ဆေးမှုရလဒ်များကို အခြေခံထားပါသည်။ ဘက်ထရီပမာဏက အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုကို မူတည်သည်။
ဒေသအပေါ်မူတည်၍ အချို့ Feature များမှာ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။ HUAWEI P30 lite အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ ဂိမ်းခြောက်ခုကတော့ PUBG Mobile, Mobile Legends, Arena of Valor, Rules of Survival, Vainglory နဲ့ NBA2K18 တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဒေသအပေါ်မူတည်၍ အချို့ Feature များမှာ အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။
HiVision က ဘာသာစကား ၁၀ မျိုးကို ဘာသာပြန်နိုင်ပါသည်။ (တရုတ်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ ဂျာမန်၊ ပြင်သစ်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရုရှား)